Ngokucacile ithonya inkolo kuleli zwe kakhulu abathintekayo emikhakheni lehlukene ukuphila zomphakathi nezombusazwe Iran. izici kaZwelonke yehlelwa futhi Armed Forces of Iran. Ibutho yezwe kubhekwa anda kakhulu phakathi nezinye lithi leMpumalanga Ephakathi. Sibalulekile isipiliyoni wezempi isakhiwo paramilitary zamanje yayingatholakala iminyaka 8 ngokuhamba impi yase-Iraq - kusukela ngo-1980 kuya 1988. izici eyayiyinhloko ukudala zokuzivikela steel base ukuzimela enamandla bezempi nabezombusazwe enye ukuphangwa ezinamathuba Iran kwezomnotho futhi okwakhe yamanani zenkolo kazwelonke.
Impi ye Sunnis kanye Shiites
Ngenxa yokuthi impi kwaba umhlanganyeli oqondile kulokhu kubulalana Arab-Iranian, a ukubaluleka okuthile ukufaniswa kwe-Armed Forces of Iran futhi Saudi Arabia ngaphakathi kwesimo phakathi kwe kwamagatsha amabili inkolo yamaSulumane. Ukuxabana Sunnis kanye Shiites is ngokusobala wawubonisa ngenhla yimpi in the 80s of XX leminyaka. ososayensi Political, izazi-mlando ukuyibiza empini yomhlaba omkhulu kunayo yonke emlandweni wamuva ngemva kwempi yezwe yesibili. Ukukhuluma ngokumelene Iranian Shia Arabhu ukukhuthalele esetshenziselwa labantu obunokuthula ezicitshwayo ballistic, izikhali zamakhemikhali. Dead obonwa abantu abangaphezu kuka-1 million kuhlanganise abazihlelele futhi zabo ezazilethwa yilabo ababemelela Armed Forces of Islamic Republic of Iran futhi Saudi Arabia.
Iraq futhi wasebenzisa nokusekela enkulu angomakhelwane Arabhu sithi. E-Iran it is akayikhohliwe.
I izingxenye Armed Forces of Iran
Iran amabutho ahlomile, isakhiwo kanye nenhlangano esibonakala ngokuba khona izakhi ezimbili ezibalulekile Uyi ukuzivikela eziyinkimbinkimbi enamandla. Eyokuqala - ekwakhekeni unomphela, lukaKhisimusi uthi emhlabeni - ibutho njalo. Esesibili - okubizwa ngokuthi Revolutionary Guards, Islamic Revolution Guards Corps. Zombili lezi zinhlangano babe subsystem yabo, ehlanganisa i-Army, Navy futhi enamandla ukulwa izindiza. Ngamunye wabo usebenza njengothisha beqiniseka sempi futhi nenkathi yokuthula.
Phakathi imibuso eyakha lo IRGC Kufanele kugcizelelwe ukuthi kukhona isakhiwo osendaweni ezibalulekile, ngokuya lapho umsebenzi oyinhloko wukuqinisekisa lezi zindondolo etholwe ngesikhathi kwesimo endaweni futhi ukuketula imisebenzi. Ngaphezu ngalezi zinhloso ekhethekile amabutho, komthetho amabutho futhi kukhona amabutho ahlomile. Iran is ikakhulukazi Kudingeka imisebenzi ekhethekile abomthetho ngesikhathi sempi siye saba. Phakathi nale nkathi, ubuholi Jikelele Abasebenzi obonisa.
Ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi IRGC futhi wadala division ezingeziwe izidlamlilo kazwelonke, ebizwa ngokuthi "Islamic Army kwezigidi ezingu-20," noma Forces of ukumelana naso futhi kwenze ukugqugquzela.
Amandla Umholi kwezikamoya isimo
Ngokusho induna Iran ogunyaziwe Statute, Art. 110 lithi uMkhuzi we mholi wamaTibet baqaphela isimo kanye nesizwe sisonke. Ngaphezu kwalokho, lokhu uMthethosisekelo, yena wanikezwa igunya ukuphatha nokwenza izinqumo ebaluleke kakhulu emkhakheni ezempi nezombusazwe yezwe. Ngamagama izimpikiswano ezinkulu ezithinta kwekhono Umholi kwezikamoya zihlanganisa:
Isimemezelo impi, ukuthula kanye ekuqaleni ukugqugquzela ngesilinganiso sesizwe sonke.
Choice aphoyintimenti, yokuxoshwa futhi ukwamukelwa Zuma we amakhanda izingxenye ngabanye futhi izingxenye Armed Forces of Islamic Republic of Iran: nomyalo Jikelele Abasebenzi IRGC, SOPs, njll ..
Ukuxhumanisa, ukuphathwa nokulawulwa umsebenzi Supreme National Security Council. Lokhu umzimba sokweluleka iyona element esibaluleke kunazo zonke sokulondeka kazwelonke, ukuzivikela khono, zamasu kanye nokuhlela Tactical umsebenzi eliphakeme esiphezulu izindikimba izimboni abafanele.
The High Council of Iranian National Security
Yezinjongo eziyinhloko isakhiwo yokugcina ukuthuthukiswa izinyathelo zokuzivikela elihambisana Umholi kwezikamoya izinqubomgomo kanye harmonization kwezenhlalakahle, ezomnotho, ulwazi kanye zamasiko yomsebenzi kahulumeni amandla izithakazelo nokuvikeleka.
Amabutho Islamic Republic of Iran angaphansi umlawuli omkhulu ngqo ngokusebenzisa General Abasebenzi. Futhi, wesibili iyunithi wokuphatha kanye nokuphatha hhayi kuphela lapho yethulwa kuleli lizwe labuswa umthetho. I-General Abasebenzi Armed Forces ihlanganisa ukuphathwa yebutho njalo futhi Labaqaphi Corps, SOPs neziphathimandla endlalekile zendawo ngayinye yalezi amayunithi nge aphoyintimenti zabo, ukwakheka kanye nemithwalo yemfanelo.
Ministry Defense Iran
UMnyango Wezokuvikela akuyona ingxenye Armed Forces of Iran. It is hhayi kuhlobane ngokuqondile imisebenzi ngokushesha ukulwa amabutho. Mission central executive:
ukugcwaliseka Ukwakhiwa kwezikhungo ezempi;
zimali, okuhloswe kuphela izimali embonini empi;
isilawuli kusho ukusetshenziswa ehlosiwe;
ukusekela umkhakha ukuzivikela yasekhaya;
ukuthenga kanye sesimanje nezempi.
Umumo wezimpi kanye nenani nezempi
Inani sezikhalazo nebantfu besive amabutho ahlomile, Iran ungakwazi ngokuziqhenya ngiziqhayise: imidiyeni ilingana ayizinkulungwane 700. Eminye imithombo ukunikeza izibalo ukuhluka: 500 kuya ngamabutho ayizinkulungwane 900. Ngaphezu kwalokho, abameleli Army komyalelo wokungabi-80% bonke abantu. Ngemuva kwabo kukhona abantu abayizinkulungwane 100 ehilelekile zezindiza abezempi ke amasosha acishe abe yizinkulungwane 40 zizinto asolwandle.
I AMANGA imininingwane kulula ukuchaza ukuntula kwabo ukufinyelela nokusondelana Iran. Lapho umphakathi wamazwe omhlaba baqale babe nesithakazelo emabuthweni ahlomile, Iran uvala uvalwe phambi kwakhe "ulwazi umnyango." Ukusakaza eyinhloko idatha ezihambayo kusuka emithonjeni ngokwethukela, izitatimende angahleliwe ngakho ngempi siqu, izikhali kanye nemishini kungenzeka njalo.
Kepha nezempi, kubuye kube phakathi Ephakathi isikhundla okuholela aphethwe amabutho amathangi Iran, ngokusho kweminye imithombo, ngokulandelana amayunithi 2,000, mayelana 2,500 wezikhali izingcezu, mayelana 900 MLRS, kuhlanganise "Grad", "Tornado" "iSiphepho" nabanye. Asinakusho amayunithi 200 anti-umkhumbi kweminsalo, 300 ukulwa izindiza, 400 iziqhumane Tactical futhi imicibisholo anti-aircraft. Lokhu akulona lonke uhlu imishini okungewakho Armed Forces of Iran. Izisebenzi Armored zenethiwekhi, elihamba lokulwa izimoto, wezikhali self ezinezinjini, izigqulo - zonke izikhali ngenhla usenza simethembe amandla leli lizwe.
Ukufundiswa nokuqeqeshwa kwabasebenzi nezikhulu
ukuqeqeshwa okuqhubekayo abasebenzi - umbuzo ngokuvamile ku-ajenda ye ukuphathwa, ngubani uphokophele amabutho ahlomile. Iran okwamanje ukuthatha izinyathelo sina emfundweni amasosha nezikhulu ezempi ukuqeqeshwa. ukuqeqeshwa Oluphelele futhi uqeqesho combat, njengoba kwaphawula u-izingqapheli kusiza indlela yokusebenza kuyo yonke imiNyango kaHulumeni kanye amayunithi lempi ezahlukene izinhlobo amabutho.
ukunakekelwa okukhethekile e inqubo yemfundo ufanelwe ngekubayala nangekubacondzisa umzimba ukuba balingise izenzo umsebenzi ngamunye wezempi ngaphansi kwezimo labashokobezi lokulwa, esimweni ukusungulwa kulo State of umbuso umsebenzi yisitha banezimfanelo ithuluzi ultra-yanamuhla. Ngaphezu kwalokho, kwaba njalo endabeni ka-non-wezempi izinga efanele ukuqeqeshwa ngemva othola ezempi ukuqeqeshwa Yiqiniso ukuthi akusho ukuthi wayengabhekiseli abafanelekela inkonzo yezempi. Bazokwazi isinxephezelo semibono engokwenkolo nokuqeqeshwa ngokokuziphatha-kwengqondo okunjalo "izikhala". Esikhathini esizayo, laba bantu bayoba nethuba lokubamba iqhaza futhi bahlele imisebenzi ngokwengqondo Armed Forces of Iran.
amabutho Uma ucabangela Iran ahlomile kufanele ukwenaba omunye izakhi zabo. Ngokuthakazelisayo, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) mhla limiswa njengoba kumiswa angesiwo agcwele ukuze kuqinisekiswe ukuze yasekhaya. Kwakheka engaphezu kwengu-30 edlule, i-IRGC iye ahlukaniswe ngokuphelele ebuthweni lempi nokuthi mbibi ngayo, e ukuthi kumayelana ukuphathwa kohlelo. Nokho, ekuqaleni kwawo-ke impi phakathi Iran Iraq Kwembulwe amathuba omkhulu engaba futhi Amatebhe zomzimba. Ngenxa predominance yempi yayo njalo ezempi, zezombangazwe, kanye nokuvikeleka amakhono abaphathi Iranian isimo umzimba alungele indima esemqoka ohlelweni we-Armed Forces. Kwaphela iminyaka eminingi, kwaba ngemva kwezikhathi zokulotshwa impi kwaba inqubo eyinkimbinkimbi uxhumano ehamba kancane izakhiwo ezimbili eziyisisekelo sphere paramilitary isimo. Ngesikhathi esifanayo lenzeka, elinye libe ngelika-umzimba futhi ibutho eMnyango Wezokuvikela, i-General Abasebenzi. Nakanjani Iranian amabutho ahlomile namuhla abe umshini eziyinkimbinkimbi futhi uhlelo kahle ka Guards, ngezindlela eziningi njengoba kuphakeme kakhulu isimo ngasinye se ibutho njalo.
Ngemva kwesikhathi esithile ukuzimisela okuthunyelwe lwekhanda Iran Revolutionary Guards uneminye umlandeli amahemuhemu mayelana nokuhlanganiswa cishe izingxenye ezimbili eziyinhloko ohlelweni wezwe yezempi, naphezu kweqiniso lokuthi umthetho kungenzeka inikezwe emzimbeni.
izikhali Uhlelo Iran yenuzi
Njengoba Iran - isimo zenuzi, kweminsalo kanye kungenzeka ngokusebenzisa kwawo - enye yezinkinga eziyinhloko we umphakathi wonke jikelele. Iran ikwazi ukulwa emuva engathandwa US izinqumo zakhe lempi Israyeli maqondana Uhlelo uMbuso zenuzi.
Ochwepheshe ehlaziya izici izingalo East, bakholelwa ukuthi kweminsalo Iran liyisici esibalulekile zokukhwabanisa nokulawula nezitha ezingaba yingozi. Ukusongela ukusetshenziswa yezikhali ezicitshwayo nge sezikhali zenuzi, isimo uyakwazi ukugcina umthetho kunoma isiphi isimo. Akumangazi ukuthi nokuxhasa lokuthabela isekelo nekutfutfukiswa kwetinhlelo nangomcibisholo, has ngempela ingxenye enkulu isabelomali ukuzivikela ngokuphelele. Ngokwesibonelo, ekuqaleni kwawo-'90s, ngemva kwempi, isimo saba eziningi "ezivulekile" ezicini kwezenhlalo nezomnotho ekuphileni kwabo. Ngakho kakade kugcizelelwa iqhakambisa wemboni wathi: inombolo yezikhali ezicitshwayo Tactical kakhulu Udlule inombolo izikhali ezinjalo e angomakhelwane namazwe asempumalanga.
Izici kumiswa kwezikhali e-Iran
Ngaphezu kwalokho, ehamba phezu "yenuzi 'indlela Iran ebhekene abaningi, lapho uqala nje ukubona, nobunzima ngokuphelele zingangentaba. Izwe akuyona ingxenye yocwaningo lakhiwe, okubandakanya isiko yesayensi, ukuqeqeshwa okukhethekile, oseneminyaka engu-. Dala izikhali ezintsha, ngakho-ke kwaba akunakwenzeka. Kwakungeke kuvesane kube belingana impumelelo owaba umqansa kunayo yonke abantu baseRussia, baseMelika noma onjiniyela Western Europe. Yingakho umkhakha ukuvikela Iran kusekelwe indlela zokweboleka onobuhle angaphandle ukuze kwenziwe kwezikhali kuleli zwe.
Lokho kusho ukuthi kube into eza kuqala emsebenzini design kanti ucwaningo cloning izikhali angaphandle, nokuningi - the sesimanje ukudlula ukuhlangabezana nezidingo Iran. Kuvele impahla okuyisibonelo Chinese, North-Korean, Pakistani, American futhi Russian imikhiqizo lempi. Lokhu kuqinisekiswa ochwepheshe ku izingalo. izikhali Iranian uya isethulo futhi ukubonisa ngokokuqala ngqa, ngokushesha wagxeka Ongoti eyaziwayo ezindabeni zezempi. "Imithombo ugqozi" Cishe Iran kuyinto ezihlukahlukene: kusukela kwempahla izikimu emthethweni intelligence wathola. Ngaphezu kwalokho, okumqoka lapha abe nesivumelwano ekubambisaneni samasosha lobuchwepheshe ngemvume bilaterally.
Ukuba khona izinkinga eziphawulekayo akazange akuvimbele ukukhandwa Ubuholi obuphezulu be-izwe ukudala lempi base ucwaningo futhi amabutho ahlomile. Iran okwamanje has a inombolo ezanele ucwaningo nezikhungo, laboratories zocwaningo zokuhlola, izikhungo design. Umi ingqalasizinda lempi iyindawo sokuthuthukiswa onobuhle entsha imishini ehlukahlukene yezempi.
Iran missile amabutho
Naphezu kweqiniso lokuthi ezahlukeneyo eziningi missile zinhlelo ekuthuthukisweni Iran kude kangaka nje esikhathini eside, le analogue ekhona kule minyaka eyishumi ezayo amathuba omkhulu yokuthola njalo ebaluleke ngokudala kokuqala esiteji missile ballistic ne medium-range ezingeni. Ukufeza lokhu kwaba nemiphumela emikhulu zokusondelana ukudalwa InterContinental ezicitshwayo ballistic. Kodwa kuze kube manje kuphela izinhlelo. Iran manje has a imishini nesizotha yezikhali ezicitshwayo kanye namasu ezicatshangwe kahle.
Eziningana missile brigades nemaphakathi yabo umyalo ilawulwe mholi wamaTibet - uMkhuzi:
"Shahab-3D" futhi "Shahab-3M" ine ezahlukene eseduze, kuyinto 1300 km. Lezi inamathelisiwe iziqhumane 32.
"Shakhab-1" futhi "Shakhab-2" linebanga kufika ku 700 km no-64 iziqhumane.
Inqubo yezikhali ezicitshwayo yokuqalisa
Rocket Forces of Armed Forces of the state Iranian kukhona, njengoba umthetho, amayunithi mobile ukwethula rocket. Leli qiniso kuba nomphumela omuhle ku ukusebenza kwabo. On ingxenye eyinhloko ibekwe base-Iran indawo rocket-technical, angafundwa izifunda Positioning. In ngamunye kubo kukhona emafektri, nophethiloli namafutha imithombo, woyela, ukuthuthukiswa yokuxhumana uhlelo, has ingqalasizinda yayo.
Izakhiwo lwamarokhethi kokuthatha off yanjalo emsebenzini, ishintshe njalo i indawo uqobo. Iziqalisi ikakhulukazi bezifihle njenge- amaloli Okuqukethwe akuzwakali, ephelezelwa ezimbili isifihlwa futhi imishini. Ngamunye wale mithandazo ithwala ngasese sezikhali ezimbili missile. Uhlelo lokususa ngokuvamile sihamba eduze iziteshi mobile babangele.
Ezama ukubikezela Yiqiniso yentuthuko simo geopolitical, kufanele bacabangele isimo socwaningo emhlabeni Iran. Ukuzimisela of the State ukuze imizabalazo kuncike isimo amabutho akhe ahlomile amasha, okuyinto has nomthelela ekuthuthukiseni izinqubo emhlabeni jikelele.
T emise umshini ufuna ukushefa: ezingaphelelwa isikhathi
Ukubalwa isinxephezelo zokuxoshwa emsebenzini
Indlela ukunqoba kule game Hermit Shadow Fight
Kangakanani panel kagesi?
Hollywood manicure - a vertex entsha futhi umusa angenakuvinjwa